Willian oo qirtay inuu ku biirayo koox ka ciyaarta horyaalka Premier League marka uu xagaagan ka tago Chelsea!… (Halkee ku sii jeedaa?) – Gool FM
(London) 31 Mar 2019. Ciyaaryahanka Willian ayaa la soo warinayaa inuu qirtay inuu doonayo inuu u dhaqaaqo koox kale oo ka dhisan England, marka uu xagaagan ka tago Chelsea.
Mustaqbalka kooxda Chelsea ee ciyaaryahan Willian ayaa mugdi soo galay, waxaana la warinayaa inuu rabo inuu xagaagan ka dhaqaaqo kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London.
Wararka waxa ay intaa ku darayaan in kooxda Tottenham ay indhaha ku hayso inay laacibkan reer Brazil beeca xorta ah ku qaadato, maadaama uu doonayo inuu sii joogo horyaalka Premier League.
Marka uu heshiiskiisa Chelsea xagaagan dhaco, Willian ayaa qirtay inuu door-bidayo inuu ku biiro koox kale oo ka ciyaarta horyaalka Premier League.
Xiddiga garabka ka ciyaara ayaa diiday inuu ogolaado heshiis cusub oo uu ku sii joogayo garoonka Stamford Bridge, iyadoo sida ay haatan wax yihiin uu qarka u saaran yahay inuu kooxda ka tago dhammaadka bisha June.
Tottenham oo uu hoggaamiyo Willian macallinkiisii hore ee Jose Mourinho ayaa xiiseynaysa inay beeca xorta ah kula saxiixato xiddigan 31-sano jirka ah sida uu warinayo Wargeyska The Sun.
Willian ayaa yiri: “Rabitaankeygu waa inaan sii joogo Premier League, laakiin meesha kama saarayo inaan ka ciyaaro horyaal kale, maya, waan ciyaari doonaa ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka aan arko waxa dhaca.
“Wadahadallada kaliya ee la taaban karo ayaa ahaa in dib loo cusbooneysiiyo heshiiska aan la galayo Chelsea, taasoo aan macquul ahayn, waxay rabeen heshiis labo sano ah, waxaanan codsaday saddex.
“Haatan, wax walba way joogsadeen.”
Willian ayaa ku dhowaaday inuu ku biiro Tottenham markii uu ka soo tagay Kooxda Anzhi Makhachkala sanadkii 2013-kii, laakiin heshiiska uu ku aadi lahaa Spurs ayaa guuldarreystay, waxaana saxiixiisa ka faa’iideysatay Chelsea oo markaas la wareegtay.
Intii lagu guda jiray waqtigiisa Blues, Willian ayaa ku guuleystay labo horyaalka Premier League, Europa League, FA Cup iyo League Cup.
Xilli ciyaareedkan, Willian ayaa 37 kulan u saftay kooxda Chelsea tartammada oo dhan, waxaana uu u dhaliyey 7 gool, isagoo caawiye ka ahaa lix gool oo kale.